जयन्ति राईले दिईन् ५० हजार ईनाम ! महिनौदेखि हराएको बालक यस्तो अवस्था फेला पर्यो (हेर्नुस् भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/जयन्ति राईले दिईन् ५० हजार ईनाम ! महिनौदेखि हराएको बालक यस्तो अवस्था फेला पर्यो (हेर्नुस् भिडियो)
करिब १ महिना अगाडी भक्तपुरबाट हराएका छोरा फेला परेका छन् । बालक फेला परेपछि निकै हर्षित भएका आमाबुवालाई जयन्ति राईले ईनाम स्वरूप ५० हजार दिएकी छिन् । भक्तपुरको ब्यासीमा बस्दै आएका प्रकाश लिम्बु र कबिता लिम्बुका १० बर्सिय छोरा प्रवेश लिम्बु र अर्का ११ बर्सिय बालक फेला परेका हुन् । हराएको १३ दिनदेखि नौबिसेको एउटा होटलमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा दुई बालक फेला परेका हुन् ।
उक्त होटलका कर्मचारीबाट दुवै बालकको बारेमा थाहा पाएपछि आमा कबिता लिम्बु त्यहाँ पुगेर बालकहरुलाई लिएर घर फर्केकी छिन् । मुटुको टुक्रा आफ्नो छोरा सकुसल भएको देखेपछि कबिताको आँखामा खुशीको आँशु अडीएन । यही पौष १९ गते बिहानदेखि साथीसँग साइकलमा गएका प्रवेश दिउसो २ बजेसम्म पनि घर नआएपछि प्रहरीलाई खबर गरेको प्रवेशका बुबा प्रकाशले बताएका थिए ।
कहाँ गएको हो भन्ने पत्तो नभएको र यत्रो दिन बितीसक्दा पनि नभेटेपछि आफ्नो छोरा हराएर बिलौना गरिरेहेका लिम्बु दम्पत्ति मिडियामा आएका थिए । बालकहरु बेपत्ता भएपछि बालक प्रवेश नभेटेपछि रुँदै उनकी आमा कविताले रुँदै छोरा भेटे यो बिरानो काठमाडौँ छोड्ने बताएकी थिईन् । छोरालाई भेटेपछि कवितासँगको भावबिभोर कुराकानी हेर्नुस् तलको भिडियोमा :
जवाफमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सांसद मोदीले अवरोध गरेका कारण दुहवी–कटहरी प्रसारणलाइनको काम पूरा नभएको आरोप लगाउनुभएको थियो । सांसद मोदीले नै प्रशारणलाइन निर्माणमा अवरोध गरेको आरोप पनि लागेको थियो । त्यसपछि कात्तिक १ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, मोरङ ४ का सांसद अमनलाल मोदी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच काम अघि बढाउने र मोदीले सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो ।
प्रसारण लाइनको अभावमा अहिले रंगेली र कटहरी क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दा र उद्योगले नियमित बिजुली पाउन सकेका छैनन् । कटहरीमा ११ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भैरहेको छ, तर लोड धान्न नसक्दा विद्युत नियमित छैन । उद्योगले मागेजति विद्युत दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । अब २ हप्ताभित्रै सवस्टेशनको चार्ज सक्ने र विद्युत आपूर्ति हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शान्ती सेनामा गएका आर्मिको श्रीमती २० लाख रुपैया लगेर अर्कै सँग भागेपछि, श्रीमान रु’दै मिडियामा
आमालाई एचआइभी छ भन्ने थाहा पाएपछि छोरीको बिहे रोकियो (भिडियो हेर्नुस्)